Maxay kawada hadleen Xaaf iyo guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka? | Somsoon
Home WARAR Maxay kawada hadleen Xaaf iyo guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka?
Maxay kawada hadleen Xaaf iyo guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka?
Ugu dambeyntii kulanka uu guddiga KMG ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka la yeeshay madaxweyne Xaaf iyo golihiisa wasiiradda iyo qaar ka mid ah xildhibaanadda Galmudug ayaa ku soo dhamaaday isfaham.
Guddigan ayaa maalmahan dambe waxay ay wadaan la kulanka Madaxda maamul-goboleedyada,iyagoona hore ula soo kulmay madaxda maamulada Hir-shabeelle iyo Puntland,waxaase la ogeyn Jubbaland cida ay kala kulmi donaan.
Article horeMagacyadda maraakiibta shisheeye ee jilaabta Kaluunka Soomaaliya oo lashaaciyay
Article socoda Khudbad ay baarlamaanka u jeedin lahayd hogaamiyaha Hong Kong oo fowdo ku dhamaatay.